किन आउँछ हाच्छ्युँ ? फाइदा गर्छ कि बेफाइदा ? जान्नुहोस्
Sat, Jan 25, 2020 at 12:41pm
एजेन्सी, ४ भदौ
रुघा लाग्दा तारन्तार हाच्छ्युँ आउँछ । तर हाच्छ्युँको यति मात्र कारण छैन । यो एउटा शारीरिक प्रक्रिया हो । दुवै राम्रो र नराम्रो संकेतका रूपमा हेरिने यो गलत समयमा हाच्छ्युँ गर्दा अशुभ हुन्छ भनेर कोहीकोही रोक्न खोज्छन् । तर यसो गर्नु गलत हो । हाच्छ्युँ रोक्दा शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ ।
हाच्छ्युँ गर्दा शरीरका पेट, छाती, डायाफ्राम, गला र आँखाहरू सक्रिय हुन्छन् । यिनीहरूको संयुक्त प्रयासले अवाञ्छित कणलाई शरीरबाहिर निकाल्छन् । हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुन्छ र यसका साथ करीब एक लाख कीटाणु बाहिर आउँछन् । निद्रामा हाच्छ्युँ आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी हाच्छ्युँ गराउने नसाहरू आराम गरिरहेका हुन्छन् ।